Fahafatesana relijiozy :: Mompera iray maty nivarina tany anaty tevana • AoRaha
Niafara tamin’ny fahafatesany ny loza nahazo ny mompera iray teny amin’ny lalam-pirenena fahaefatra, kilaometatra vitsy miala an’Andranovelona, tamin’ny alin’ny sabotsy lasa teo. Nivarina tany anaty hantsana niaraka tamin’ny kodiaran-droa noentiny io relijiozy io. Fantatra fa mompera ao amin’ny fiangonana katoloka eny amin’ny distrikan’Ambohidratrimo ity niharan’ny lozam-pifamoivoizana ity. Telo amby efapolo taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Avy namita iraka tamin’ny fitetezana sy famangiana fiangonana teny Andranovelona i mompera, nialoha ny nisehoan’ny loza tamin’io harivan’ny sabotsy io, araka ny fanampim-panazavana avy tamina loharanom-baovao iray.
Nandeha irery nitondra môtô izy ary nitodi-doha hihazo an’Ambohidratrimo. Tsy fantatra mazava ary tsy nisy nahita ny fisehon’ny loza. Taratry ny jiro avy tamin’ny môtôny tany anaty hantsana no tazan’ny mpandeha fiara iray sendra nandalo. Ireo mpandeha ireo no niantso ny mpitandro ny filaminana sy nitondra an’ilay niharam-boina teny amin’ny hopitaly.
«Nisy nampandre izahay tokony ho tamin’ny valo ora alina fa misy olona sy môtô latsaka ao anaty tevana ankavanan-dalana. Somary lalindalina ny hantsana nianjerany. Voatsindrin’ny môtô tao ny mpamily. Fantatra avy eo fa mompera ity tra-doza», araka ny fanazavana avy amin’ny zandary eny Fihaonana.
Milaza ny mpanao fanadihadiana fa niala ny lalana no nampivarina an’ilay kodiaran-droa tany anaty hantsana. Namoy ny ainy teny an-dalana hitondrana azy ho any amin’ny hopitaly Bejofo Mahitsy ilay relijiozy. Nahitana ratra ny vatany ivelany. Ny valin’ny fizahana nataon’ny mpitsabo no hamaritana ny antony nitarika ny fahafatesany.
Halatra teny Amboditsiry :: Lehilahy iray maty voatsatoka antsy sady voatifitry ny tompon-trano
Fenoarivo Atsinanana :: Andramena sivy amby dimampolo, saron’ny zandary